theZOMI: [mrsorcerer:38220] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] နီ ယိုမော် ဒန် အ နှ စ် ချု ပ် # 1&2
[mrsorcerer:38220] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] နီ ယိုမော် ဒန် အ နှ စ် ချု ပ် # 1&2
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] နီ ယိုမော် ဒန် အ နှ စ် ချု ပ် # 1&2
by Aung Yin Nyein (Notes) on Wednesday, May 8, 2013 at 3:21am
မြန်မာကဗျာသမိုင်းကို သမင်လည်ပြန်လှည်.ကြည်.ရင် ခန်.မှန်းပျမ်းမျှ အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက်အကြာမှာ တစ်ကြိမ်နှုန်းနဲ.ကဗျာယဉ်ကျေးမှုရှော.ခ် (သို.မဟုတ်) ကဗျာလမ်းကြောင်း အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်လေ.၇ှိတာတွေ.၇ပါတယ်။ခေတ်စမ်းကဗျာခေတ် (၁၉၃၄၀န်းကျင်)၊စာပေသစ်ခေတ် (၁၉၅၀၀န်းကျင်) ၊တော်လှန်ကဗျာနဲ. မိုးဝေကဗျာခေတ် (၁၉၇၀ ၀န်းကျင်)၊ခေတ်ပေါ်ကဗျာခေတ် (၁၉၉၀၀န်းကျင်)တွေဟာ မြန်မာကဗျာ သမိုင်းမှာ သိသာထင်ရှားတဲ. ကဗျာယဉ်ကျေးမှု ရှာ.ခ်တွေဖြစ်ပွားခဲ.တဲ. နှစ်ကာလတွေပါပဲ။
၁၉၉၀ ၀န်းကျင်ကစပြီး အရှိန်မြှင်.လှုပ်ရှားသက်ဝင်လာတဲ.ခေတ်ပေါ်ကဗျာဟာ မြန်မာကဗျာလောကရဲ. ပင်မရေစီးဖြစ်လာခဲ.ကာ ၂၀၀၅ ၀န်းကျင်အထိသြဇာကြီးမားသက်ရောက်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။၂၀၀၅၀န်းကျင်မှာတော. ကဗျာ ဆရာဇေယျာလင်းမိတ်ဆက်တင်သွင်းတဲ. အမေရိကန်ဘာသာ စကားကဗျာ (L=A=N=G=U=A=G=E= POETRY) အယူအဆတွေထွက်ပေါ်လာပြီး ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနဲ. တစ်ဝက်နီးပါးထီးနန်းစိုးစံနေတဲ.၊လမ်းဟောင်းအတိုင်းမပြောင်းလဲ တေ၇ွ.ေ၇ွ.စီးဆင်းနေတဲ. ပင်မေ၇စီးခေတ်ပေါ်ကမ်းပါးကို တိုက်စားဖြိုချပစ်လိုက်ပါတယ်။L.Pကဗျာလှုပ်၇ှားမှုကြောင်.ခေတ်ပြိုင် မြန်မာကဗျာလောကမှာ ပို.စ်မော်ဒန်ကဗျာဗေဒ သြဇာယူခဲ.တဲ.ကဗျာဂိုဏ်းနဲ.နိုင်ငံရပ်ခြားကဗျာဗေဒကို ဆန်.ကျင်ငြင်းဆန်ပြီးကိုယ်.နည်းကိုယ်.ဟန်နဲ.အသစ်လုပ်မယ်. နီယိုမော်ဒန်ကဗျာဂိုဏ်းတွေကွဲပြားထွက်ပေါ်လာခဲ.ပါတယ်။
အဲဒီကာလတွေမှာ ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာယဉ်ကျေးမှုအဟောင်းနဲ. ဘာသာစကားကဗျာဗေဒယဉ်ကျေးမှုအသစ်အကြား အနုပညာနဲ. အယူအဆရေးရာ ဆန်.ကျင်တိုက်ခိုက်မှု၊ထိတွေ.ပွတ်တိုက်မှု၊ရောယှက်ပေါင်းစပ်မှု စတဲ. ယဉ်ကျေးမှုရှော.ခ်တွေဖြစ်ပွားခဲ.ရာကမြန်မာကဗျာလောကမှာနောက်ထပ် ကဗျာယဉ်ကျေးမှုအသစ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်ဖြစ်ထွန်း လာခဲ.ပါတယ်။
အဲဒီ မြန်မာကဗျာယဉ်ကျေးမှုအသစ်ကတော. နီယိုမော်ဒန်ကဗျာယဉ်ကျေးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။
နီယိုမော်ဒန်ကဗျာအယူအဆတွေဟာ ၂၀၀၇မတ်လ ၂၁ ရက်နေ. ကမ္ဘာ.ကဗျာနေ.မှာ ထုတ်ဝေတဲ."မြန်မာခေတ်ပေါ်ကဗျာသစ် ကြေညာစာတမ်း၂၀၀၇"မှာအစပြုသန္ဓေတည်ခဲ.ပါတယ်။နီယိုမော်ဒန်ဟာပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာအာရုံခံစားပုံ၊အာရုံခံစားမှု၊ရေးဟန်၊နည်းစနစ်တွေကိုချဲ.ထွင်ကျော်လွန်ဖို.ကြိုးစားရင်းခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာလောကထဲက ပို.စ်မော်ဒန်စာပေအယူတချို.နဲ.ကဗျာအနုပညာလက်ရာတွေကိုဆန်.ကျင်ဝေဖန်ရင်းက အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ. ကဗျာအယူအဆတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
နီယိုမော်ဒန်ဟာ Neomodernism မဟုတ်ဘဲNew Poetic Concept တစ်မျိုးသာဖြစ်ပါတယ်၊
နီယိုမော်ဒန်အကြောင်းပြောရင်Neomodern ဆိုတဲ. ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းကိုစတင်ရှင်းလင်းရပါလိမ်.မယ်။နီယိုမော်ဒန်မှာNeo ရှေ.ဆက်စကားလုံးရဲ.အဓိပ္ပာယ်ကိုnew/in the later from ဆိုတဲ. အနက်တွေနဲ.သုံးစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။LONGMANDictionary of Contemporary English မှာတော. Neo-//based onastyle,set ofideas,or political system that existed in the past ;လို.အနက်ဖွင်.ပေးထားပါတယ်။နီယိုမော်ဒန်မှာNeo ရှေ.ဆက်စကားလုံးကို new ဆိုတဲ.အဓိပ္ပာယ်နဲ. အဓိကသုံးစွဲတာဖြစ်ပေမယ်. ဆက်စပ်ချဲ.ထွင်အနက် ဖွင်.ရင်not before /notused before/unfamiliar/recently changed/recently discovered အဓိပ္ပာယ်တွေအထိကျယ်ပြန်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
နီယိုမော်ဒန်ဆိုတာပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာကိုupdate/vt /make more;bring up to dateဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ.ကဗျာအမျိုးအစားတစ်မျိုးပါပဲ။
ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာကို ကျော်လွန်ဖို.ကြိုးစားနေတဲ. နီယိုမော်ဒန်မှာခိုင်မာသေချာတဲ. နောက်ခံအယူအဆနဲ.သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေရှိပါတယ်။နီယိုမော်ဒန်နောက်ခံအယူအဆနဲ.သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကိုလိုရင်းအချက်အလက်အတိုင်း ဖော်ပြရရင်-
၄။လူသားရဲ.ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပေါ်လွင်ခြင်း၊လူရဲ. ပုဂ္ဂလိကသဘောကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၅။ခေတ်ပြိုင်ထဲကModern/Neomodern& PostmodernSensibility ပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်း
၆။လူအုပ်ကြီးထဲရောနှောပျောက်ဆုံးနေတဲ.Identity ကို ရှာဖွေ တည်ဆောက်ခြင်း
(ရည်ညွှန်း။ ။ နီယိုမော်ဒန်နောက်ခံ အယူအဆနှင်.သွင်ပြင်လက္ခဏာအချို.၊ နွယ်နီမဂ္ဂဇင်း)
နီယိုမော်ဒန်ဟာပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာကို ချဲ.ထွင်ကျော်လွန်ဖို.ကြိုးစားရာကအသစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ.ကဗျာအယူအဆအသစ်တစ်မျိုးလို.ဆိုရင် ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာလက္ခဏာတွေကိုဘယ်လိုဘယ်ပုံ ဆန်.ကျင်ချဲ.ထွင်လာသလဲဆိုတာနှိုင်းယဉ်စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည်.ဖို.လိုပါလိမ်.မယ်။မြန်မာကဗျာလောကရဲ.ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာဟာ၁၉၆၉ သပြေ၀ပ်ရှော.၊ဆရာမြဇင်ရဲ."ခေတ်ပေါ်ကဗျာကြေညာစာတမ်း"ခေတ်ပေါ်ကဗျာယေဘုယျလက္ခဏာတွေအပေါ်အခြေခံတည်ဆောက်ထားတဲ.ကဗျာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်.ခေတ်ပေါ်ကဗျာရဲ. ယေဘုယျလက္ခဏာတွေက-
ဆရာမြဇင်ရဲ. ခေတ်ပေါ်ကဗျာယေဘုယျလက္ခဏာတွေအပြင်ကဗျာလေ.လာသူတစ်ဦးပေါင်းစပ်တင်ပြခဲ.တဲ.အတွင်းစိတ်ခံစားမှု (Inner Feeling)၊စကားပြောရစ်သမ်(Spoken Rhythm)၊လွတ်လပ်စွာဖော်ပြချက်(Freedomof Expression)ဆိုတဲ. ခေတ်ပေါ်ကဗျာအဓိကလက္ခဏာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
နီယိုမော်ဒန်မှာတော. ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်လက္ခဏာတွေနဲ.ဆန်.ကျင်ကွဲလွဲနေတဲ.လက္ခဏာအသစ်တွေကို တွေ.မြင်လာရပါတယ်။နီယိုမော်ဒန်ရဲ. သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေက-
၁။အကွက်သဘောမဟုတ်၊ချည်မျှင်ဆန်သောလိုင်း(FibrousLines) များဖြင်. ဖွဲ.စည်းခြင်း
၄။ပြင်းထန်လေးနက်သောအတွင်းစိတ်ခံစားမှု(InnerFeeling)များမဟုတ်၊ ယနေ.ခေတ်နှင်.အညီ အပေါ်ယံဆန်သောလွတ်လပ်ပေါ.ပါးသောအမြင်များဖြစ်ခြင်း
၁၄။ပုဂ္ဂလိကခံစားမှုနှင်. လူ.အဖွဲ.အစည်းအပေါ် အမြင်ရောစပ်ခြင်း
(ရည်ညွှန်း။ (၁)ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာ၊နီယိုမော်ဒန် နှင်.ပို.စ်မော်ဒန်ခေတ်ပြိုင်ကဗျာလမ်းမြွှာများ
(၂)နီယိုမော်ဒန် = ပို.စ်မော်ဒန်
နွယ်နီမဂွှဇင်း၊ အမှတ် ( )၊ ၂၀၁၀
ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကနေ နီယိုမော်ဒန်ဆီအရွေ.မှာရေးဟန်အပြောင်းအလဲ(Stylistic Transformation)ဟာအရေးကြီးပါတယ်။နီယိုမော်ဒန်ရဲ.Techniqueပိုင်းဖြစ်တဲ.ရေးဟန်အပြောင်းအလဲမှာ-
ဒီနေ. ခေတ်ပြိုင်ကဗျာယဉ်ကျေးမှုဟာ ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာပြိုကွဲမှုနဲ.နီယိုမော်ဒန်၊ပို.စ်မော်ဒန်ကဗျာအသစ်ဖြစ်ထွန်းမှုစပ်ကြားကာလကိုဖြတ်သန်းနေပါတယ်။ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာ(ContemporaryMyanmarPoetry)ဆိုတဲ.စကားရပ်မှာ ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာ၊နီယိုမော်ဒန်၊ပို.စ်မော်ဒန်၊ဘာသာစကားကဗျာ၊စမ်းသပ်ကဗျာ၊စကားပြေကဗျာ၊ကောလာ.ဂ်ျကဗျာနဲ.ကွန်ဆက်ချူရယ်ကဗျာ အမျိုးအစားတွေပါဝသ်ပါတယ်၊
ခေတ်ပြိုင်ကဗျာတွေမှာ အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းအလိုက်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်လက္ခဏာတွေနဲ.သီးခြားဖြစ်နေတဲ.ကဗျာတွေရှိသလိုအမျိုးအစားတစ်ခုနဲ.တစ်ခုနယ်ပယ်ချင်း၊လက္ခဏာချင်းရောထွေးနေတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ကာယကံရှင် ကဗျာဆရာကပို.စ်မော်ဒန်လို.ပြောပေမယ်.နီယိုမော်ဒန်ဖြစ်နေတဲ.ကဗျာတွေ၊နီယိုမော်ဒန်လို.ပြောပေမယ်.ပို.စ်မော်ဒန်ဖြစ်နေတဲ.ကဗျာတွေ၊နီယိုနဲ. ပို.စ်မော်ဒန်လက္ခဏာရောထွေးနေတဲ.ကဗျာတွေ ဒီနေ.ခေတ်ပြိုင်ကဗျာလောကမှာအများအပြားမြင်တွေ.နေရပါတယ်။
၂၀၀၇၊၂၀၀၈၊၂၀၀၉သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာခေတ်ပြိုင်မြန်မာကျှာယဉ်ကျေးမှုကိုဆန်းသစ်ချဲ.ထွင်လိုတဲ.၊လွတ်လပ်ကျယ်ပြန်.တဲ.ကဗျာအမြင်ရှိတဲ. ကျှာဆရာတစ်ချို.ဟာနီယိုမော်ဒန်ကဗျာတွေဆန်းသပ်ရေးသားလာခဲ.ကြပါတယ်။လူအများနားလည်အောင်အကြမ်းဖျဉ်းပြောရရင်ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ် ကဗျာလက္ခဏာတွေကိုကျော်လွန်လာပြီး ဘာသာစကားကဗျာနဲ.ပို.စ်မော်ဒန်ကဗျာနယ်ပယ်ကို မရောက်တဲ.ကဗျာအမျိုးအစားတွေကိုနီယိုမော်ဒန်ကဗျာတွေလို. ခြုံငုံခေါ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဘာသာစကားကဗျာနဲ.ပို.စ်မော်ဒန်ကဗျာနယ်ပယ်ဆိုတာအဲဒီကဗျာဗေဒတွေနဲ.ဘာသာစကားအယူအဆ၊အနုပညာအယူအဆ၊ရသအယူအဆ၊သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေသြဇာသက်ရောက်လွှမ်းခြုံမှုရှိတဲ.နယ်နိမိတ်ကို ဆိုလိုပါတယ်။ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာကိုကျော်လွန်လာတဲ.အပြင်ဘာသာစကားကဗျာနဲ. ပို.စ်မော်ဒန်ကျှာတွေရဲ.အရိပ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကလွတ်ကင်းနေတယ်ဆိုရင် နီယိုမော်ဒန်ကျှာလို.အကြမ်းဖျဉ်းပြောနိုင်ပါတယ်။
ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာဆရာအချို.ရဲ.နီယိုမော်ဒန်ကဗျာတွေဟာနီယိုမော်ဒန်နောက်ခံအယူအဆနဲ. သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေအနည်းနဲ.အများကိန်းအောင်းရောနှောပါဝင်နေတဲ. ကဗျာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ.တဲ.(၃)နှစ်ကာလအတွင်းနီယိုမော်ဒန်လမ်းကြောင်းဆီဦးတည်ရွေ.လျားလာတဲ. နီယိုမော်ဒန်ကဗျာမျိုးကွဲတွေအများအပြားအသစ်ပေါ်ပေါက်ဖြစ်ထွန်းလာတာတွေ.ရပါတယ်။နီယိုမော်ဒန်ကဗျာမျိုးကွဲတွေကတော.-
(၈) ဟိုက်ဘရစ်ဒ်နီယိုမော်ဒန် ( Hybrid Neomodern/ Hybrineo )
(၉) ကွန်ဆက်ခြူရယ် နီယိုမော်ဒန် ( Conceptual Neomodern/ Concepneo )
(ရည်ညွှန်း။ နီယိုမော်ဒန် လမ်းသွယ်လမ်းမြွှာများ၊အလင်းတန်းဂျာနယ်၊၂၀၀၉)
အဲဒီနီယိုမော်ဒန် ကဗျာမျိုးကွဲတွေအားလုံးကို ပေါင်းစုပြီးNeomodernsလို.ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။နီယိုမော်ဒန်ကဗျာအဖြစ် သတ်မှတ်ရာမှာ-
(၁)နီယိုမော်ဒန်နောက်ခံအယူအဆတွေနဲ. သွင်ပြင်လက္ခဏာတချို.ကို အခြေပြုစဉ်းစားပါတယ်။
(၂)နီယိုမော်ဒန်သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေနဲ. တိုက်ဆိုင် ညှိနှိုင်းပါတယ်။
(၄)နီယိုမော်ဒန်မျိုးကွဲဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာတွေကို မှန်းဆစဉ်းစားပါတယ်။
(၅)နီယိုမော်ဒန်ရဲ.POM ဘာသာစကားအယူအဆနဲ. တိုက်ဆိုင်ညီညွတ်မှုရှိ/မရှိ စဉ်းစားပါတယ်။
(၆)နီယိုမော်ဒန်Idelogy & Concept တွေနဲ. နီယိုမော်ဒန်အာရုံခံစားပုံ/မှု ရမရဆိုတာကိုလည်းအချက်အလက်တစ်ခု အဖြစ် ထည်.သွင်းစဉ်းစားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို.ဆီမှာ တချို.ကဗျာဆရာတွေက နီယိုမော်ဒန်နဲ.ပို.စ်မော်ဒန်ကိုကဗျာအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းလို. ယူဆပြီးရောထွေးနားလည်ထားကြပါတယ်။
တကယ်တမ်းက Neo နဲ. Pomo ဟာ စကားလုံးဝေါဟာရအဓိပ္ပာယ်၊ဘာသာစကားနဲ. အနုပညာအယူအဆ၊ကဗျာဗေဒနဲ. ရသအမြင်၊အနုပညာဖန်တီးမှု သဘောထားတွေမှာလုံးဝကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ဒီလိုကွဲပြားခြားနားမှုရှိနေတဲ.အကြောင်းရင်ခံ/အယူအဆတွေအပေါ်မူတည်ပြီး Neo နဲ.Pomoကိုခွဲခြားနားလည်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်.အနေနဲ.တော. Neo နဲ. Pomo ကို Aesthetic &PoeticSensibility နဲ. ခံစားသိမြင်ခွဲခြားနားလည်နိုင်တယ်လို. ယူဆပါတယ်။Sensibility ဆိုရာမှာအာရုံခံစားမှု၊အာရုံခံစားပုံ၊အာရုံခံစားနိုင်စွမ်းရည် အနေအထား(၃)မျိုးလုံးအကျူံးဝင်ပါတယ်။ဒါ.အပြင်ခေတ်ပြိုင်လူမှုအကြောင်းခြင်းရာတွေပါမပါ၊ကဗျာဓာတ်ကိန်းမကိန်း ၊စာသားတွေဆီကတဆင်.ခံစားရရှိတဲ. ရသပုံစံစတဲ. အချက်အလက်တွေအပြင်ပုဂ္ဂလိကတန်ဖိုးစံနှုန်းတွေနဲ.လည်း Neo နဲ. Pomo ကိုခွဲခြားနားလည်နိုင်ပါတယ်။
Neo နဲ. Post ဟာ စကားလုံးဝေါဟာရ အဓိပ္ပာယ်ချင်းလည်းမတူညီပါဘူး။
Neo ဆိုတဲ.ရှေ.ဆက်စကားလုံးကို OXFORD Advanced English Dictionaryမှာ[neo//new,modern,in the later form]လို.အနက်ဖွင်.ပေးထားပါတယ်။
Post ရှေ.ဆက်စကားလုံးကိုတော.Post // later than or aftersomething;လို. LONGMAN Dictionary ofContemporary English မှာအနက်ဖွင်.ပေးထားပါတယ်။LONGMAN အဘိဓာန်ထဲမှာပဲPostmodernism//a styleofbuilding,painting,writing etc,developed inthe late thatcentury,that uses amixture of old and new styles asareaction againstMODERNISM....
Postmodern//1.relating to or influenced by Postmodernism;2.used to described styles,attitudes etc..,thatare typical of thesocil life that is found in many western countries now,in which television,video,the buying of goods and services etc are very important;ဆိုပြီး အဓိပ္ပာယ်အကျဉ်း ဖွင်.ဆိုပေးထားပါတယ်။
OXFORD& LONGMAN အဘိဓာန်နှစ်ခုလုံးမှာ Neomodern စကားလုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင်.ဆိုချက်မပါဝင်တဲ.အတွက် စကားလုံးဝေါဟာရအဓိပ္ပာယ်အရ Neo နဲ.Pomo ကိုအတိအကျနှိုင်းယဉ်ပြဖို.မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။Neo နဲ. Postရှေ.ဆက်စကားလုံးတွေရဲ. အနက်အဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားခြားနားမှုနဲ. Pomo အဓိပ္ပာယ်ဖွင်.ဆိုချက်တွေကိုဆက်စပ်ချဲ.ထွင်စဉ်းစားကြည်.ရင်စကားလုံးဝေါဟာရအဓိပ္ပာယ်အရ Neo နဲ. Pomo ကြားကကွဲပြားခြားနားမှုကိုနားလည်သိမြင်နိုင်မယ်လို. ယူဆပါတယ်။
ကျွန်တော်တို.ပြောဆိုသုံးစွဲနေတဲ. Neomodernဝေါဟာရထဲက modern စကားလုံးဟာ အနောက်တိုင်းလူ.အဖွဲ.အစည်းထဲက Modern/Modernism ကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။Neomodern ဝေါဟာရထဲက modern ဟာ ကျွန်တော်တို.ဆီမှာ၁၉၉၀ ၀န်းကျင်နောက်ပိုင်း ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာ(သို.)မော်ဒန်ကဗျာလို.ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ.ကဗျာအမျိုးအစားကိုသာ သီးခြားရည်ညွှန်းပါတယ်။အဲဒီတော.Neomodern ဆိုတာ ပင်မရေစီးခေတ်ပေါ်ကဗျာရဲ. အာရုံခံစားပုံ၊အာရုံခံစားမှု၊ရေးဟန်နည်းစနစ်တွေကိုချဲ.ထွင်ကျော်လွန်ဖို.ကြိုးစားတဲ. ၊အသစ်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို.ကြိုးစားထားတဲ.ကဗျာအမျိုးအစားလို.ပဲ အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါတယ်။
တပြိုင်တည်းမှာပဲနီယိုမော်ဒန်ဟာ ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာလောကထဲက ပို.စ်မော်ဒန်စာပေ အယူအဆတချို.နဲ. ကဗျာအနုပညာလက်ရာတွေကိုဆန်.ကျင်ဝေဖန်ရင်းက အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ.ကဗျာအယူအဆတစ်မျိုးဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
Neomodern ဟာAnti-Postmodern Poetryအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။Anti-ရှေ.ဆက်စကားလုံးကိုopposed to /angainst / instead of ဆိုတဲ.အနက် အဓိပ္ပာယ်နဲ. သုံးစွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို.ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာနယ်ပယ်အတွင်းမှာနီယိုမော်ဒန်ဟာ ပို.စ်မော်ဒန်စာပေအယူအဆ/ကဗျာအနုပညာလက်ရာတွေနဲ. ဘယ်လိုဆန်.ကျင်ကွဲလွဲမှုရှိနေပါသလဲ။နီယိုမော်ဒန်ဟာ-
၁။ခေတ်ပြိုင်လူမှုအကြောင်းခြင်းရာ(Social Issues)တွေကို မျက်ကွယ်ပြုခြင်းကိုဆန်.ကျင်ပါတယ်။
၂။သက်ရှိလူသားရဲ.အာရုံခံစားမှုနဲ. အသိအမြင်ထက် သက်မဲ.ဘာသာစကားသင်္ကေတအဆောက်အအုံကို ရှေ.တန်းတင်ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်နေခြင်းကို ဆန်.ကျင်ပါတယ်။
၃။စာသားတွေကပေးတဲ. ဆိုလိုရင်း/အနက်အဓိပ္ပာယ်တွေ ဖရိုဖရဲဖြစ်သွားတဲ.အထိ ချိုးဖျက်/ရပ်ဆိုင်း/ဟန်.တားတဲ. Language Game ပြုလုပ်ခြင်းကိုဆန်.ကျင်ပါတယ်။
၅။ကဗျာဖန်တီးခြင်းအယူအဆကိုလက်ခံပြီး ကဗျာပြုလုပ်ခြင်း အယူအဆကိုဆန်.ကျင်ပါတယ်။
၆။ပုံသဏ²ာန်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါက်ကွဲမှုအစွန်းရောက်ခြင်း၊ပုံသဏ²ာန်ကို အဓိကထားလွန်းခြင်းကို ဆန်.ကျင်ပါတယ်။
၇။စာသားအဆောက်အအုံမှန်သမျှ ကဗျာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ.အယူအဆကို ဆန်.ကျင်ပါတယ်။
၈။ပဋိကဗျာအယူအဆ(Anti-Poetry Concept)ကို ဆန်.ကျင်ပါတယ်။ကဗျာဓာတ်(Sense of Poetry)ကိုငြင်းဆန်ခြင်းကိုဆန်.ကျင်ပါတယ်။
၁၀။အနုပညာရှင်က"ဒါ အနုပညာဖြစ်တယ်"လို.ပြောရင် အဲဒီလက်ရာဟာအနုပညာပဲဆိုတဲ.အာဏာရှင်ဆန်တဲ.အယူအမြင်ကို ဆန်.ကျင်ပါတယ်။
၁၁။စာရေးသူကဗျာဆရာကအနုပညာလက်ရာ/ကဗျာပါလို.ပြောတိုင်းမျက်လုံးစုံမှိတ်လက်မခံပါဘူး။စာသားအဆောက်အအုံတိုင်းကိုသံသယစိတ်နဲ.စစ်ဆေးပါတယ်။အနုပညာမြောက်မမြောက်၊ကဗျာဖြစ်မဖြစ်ကို ကိုယ်.အကြိုက် ၊အသိနဲ.ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။အနုပညာလက်ရာတစ်ရပ်ကို ချဉ်းကပ်ခံစားရာမှာ ကိုယ်ပိုင်ရသဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်(Self-Aesthetic Determination)ပြုလုပ်ခြင်းကို အလေးထားပါတယ်။
၁၂။အနုပညာလက်ရာအဆင်.အတန်းခွဲခြားခြင်းကို လက်ခံပြီး ပို.စ်မော်ဒန်တွေရဲ.အနုပညာလက်ရာအဆင်.အတန်းခွဲခြားမှုမရှိတဲ. အယူအဆကိုငြင်းဆန်ပါတယ်။
၁၄။ခေတ်ပြိုင်လူ.အဖွဲ.အစည်းထဲကယဉ်ကျေးမှု၊ လူမှုရေးနဲ.ဆိုင်တဲ.ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တွေကိုသာဝေဖန်လှောင်ပြောင်သရော်ပြီး ကဗျာအနုပညာအပေါ်လှောင်ပြောင်သရော်ခြင်းကိုဆန်.ကျင်ပါတယ်။
၁၅။အရာရာကိုရသပစ္စည်းပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ.အားနည်းချက်ရှိတဲ. အယူအဆကို ဆန်.ကျင်ပါတယ်။
၁၆။လူသားအနေအထားကိုစာပေဆိုင်ရာ သဘောတရားရင်းမြစ်အားဖြင်.ဖော်ပြမှုအပေါ်သာအခြေပြုတွေးတေားမှုပြုခြင်းကို ဆန်.ကျင်ပါတယ်။
၁၇။စာရေးသူရေးသားတည်ဆောက်လိုက်တဲ. ဘာသာစကားရဲ.အပေါ်ယံအလွှာစကားလုံး၊သင်္ကေတ၊အမှတ်အသား၊အညွှန်းပြုတွေနဲ. သူတို.ကို အဓိပ္ပာယ်အနက်ဖွင်.ဆိုရာကရရှိလာတဲ. အညွှန်းခံ၊ အဓိပ္ပာယ်၊အနက်သဘောတွေထဲမှာပဲ အာရုံစူးစိုက်နစ်ဝင်နေပြီး ဘာသာစကားကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ. စာရေးသူရဲ.လိုအင်ဆန္ဒ၊အာရုံခံစားမှု၊အာရုံအတွေ.အကြုံ၊ရည်ရွယ်ချက်၊အဇ္ဈတ္တခံစားမှု၊စိတ်ကူးစိတ်သန်း၊ဘ၀အမြင်၊အာရုံသိမှုတွေကိုအလေးအနက်မပြုတဲ.စာဖတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်သဘောထားကို ဆန်.ကျင်ပါတယ်။
၁၈။အနုပညာလက်ရာတစ်ရပ်ဖန်တီးပြုလုပ်ရာမှာ ခံစားချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြခြင်း (Expression of Emotion)၊ဈာန်ဝင်စားမှု(Inspiration)အနုပညာပါရမီ (Artistic Genius)၊တီထွင်စိတ်ကူးဥာဏ် (Creative Imagination)၊ပင်ကိုစွမ်းရည်(Orginality)၊လောကအမြင်(Philosophyof Artist)၊ထိုးထွင်းသိမြင်မှု(Intution)၊ရသခံစားနိုင်စွမ်းရည်(Asethetic Sensibility)အစရှိတဲ. အနုပညာအတွေ.အကြုံ(Art Experience)တွေဟာအရေးမပါဘူးဆိုတဲ. အယူအဆကို ဆန်.ကျင်ပါတယ်။
၁၉။CreationNeoaesthetic (ရသအသစ်ဖန်တီးခြင်း)နဲ.Aesthetic-shift (ရသအပြောင်းအလဲ)ကိုလက်ခံပေမယ်. Anti-aesthetic (ပဋိရသ)အယူအဆ၊အနုပညာမပါတဲ. အနုပညာအယူအဆတွေကိုဆန်.ကျင်ပါတယ်။
နီယိုမော်ဒန်ဟာ အထက်ပါအကြောင်းအရာ၊ပုံသဏ²ာန် ၊ဘာသာစကားအမြင် ၊ကဗျာအမြင်၊ရသအမြင်၊အနုပညာအပေါ်သဘောထားကိစ္စတွေမှာ ပို.စ်မော်ဒန်နဲ. ဆန်.ကျင်ကွဲလွဲမှုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ.နီယိုမော်ဒန်ဟာအတတ်ပညာ၊နည်းစနစ်နဲ. လက္ခဏာပိုင်းမှာပို.စ်မော်ဒန်နဲ.ဆင်တူယိုးမှား၊ရောနှောမှုတချို.တော.ရှိနေပါတယ်။နီယိုမော်ဒန်အနေနဲ. ပို.စ်မော်ဒန်နည်းစနစ်တချို.ကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို ယူငင်သုံးစွဲမယ်လို. "မြန်မာခေတ်ပေါ်ကဗျာကြေညာစာတမ်းသစ် ၂၀၀၇"မှာတရားဝင်ပြောခဲ.ဖူးပါတယ်။နီယိုမော်ဒန်၇ဲ. ချည်မျှင်ဆန်သောလိုင်းများ(FibrousLines)နဲ. ပို.စ်မော်ဒန်ရဲ. အပိုင်းအစများ(Fragments)ပေါင်းစပ်ရေးဖွဲ.ခြင်းဟာ နီယိုမော်ဒန်ကဗျာမှာ အရေးကြီးတဲ.လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်လာပါတယ်။တချို.နီယိုမော်ဒန်ကဗျာ၊ အထူးသဖြင်. Post+ Neomodern(Poneo)ကဗျာတွေမှာနီယိုနဲ. ပို.စ်မော်ဒန် နည်းစနစ်ရောစပ်မှုဟာ ၇၀း၃၀ အချိုးလောက်ရှိပါတယ်။
ဒီလိုနည်းစနစ်ရောထွေးမှုရှိပေမယ်.နီယိုနဲ. ပို.စ်မော်ဒန်ကို Sensibility နဲ.ခွဲခြားနားလည်နိုင်ပါတယ်။နီ.ယိုနဲ. ပို.စ်မော်ဒန်ဟာ Sensibility ချင်းမတူပါဘူး။
နီယိုနဲ. ပို.စ်မော်ဒန်ဟာ Sensibility ချင်းမတူရုံသာမကဘာသာစကားအယူအဆမှာ ဆန်.ကျင်ဘက် ပဋိပက္ခအသွင်ဆောင်တဲ.အထိသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားနေပါတယ်။
#3တွ င် ဆ က် လ က် ဖ တ် ရှု ပါ ရ န်
ေ အာင် ရ င် ငြိ မ်း
မှတ်ချက်။ နီယိုမော်ဒန် ကဗျာမျိုးကွဲများ အကြောင်းကိုပါ သိလိုပါက www.neomodernmyanmarpoetry.blogspot.com ပါ ကဗျာဆောင်းပါး/ ချဉ်းကပ်ဆောင်းပါးများ တွဲဖတ်ရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 5/09/2013 10:10:00 PM